Publications Archives - Page 3 of 4 - Heal Zimbabwe Trust
The 2008 harmonized elections and the subsequent presidential re-run in Zimbabwe left a trail of destruction to property, human life, displacements, and a buttered social fabric. More than 500 people…
Continue ReadingNhimbes: an effective tool to achieve inclusive peace and reconciliation ﻿
Heal Zimbabwe unreservedly condemns the harassment of citizens in Gutu Central by alleged members of the security services after they had participated in the Maintenance of Peace and Order (MOPO)…
Continue ReadingHeal Zimbabwe condemns harassment of citizens after MOPO bill hearings
Continue ReadingA Case for National Dialogue in Zimbabwe
Continue ReadingNational Dialogue, the only way to go
This baseline study is one of Heal Zimbabwe Trust’s contribution towards remedying the residual effects of past human rights violations. A thorough consideration of concerns raised in this report and…
Continue ReadingBaseline Report on Peace and Reconciliation processes in Zimbabwe
Heal Zimbabwe conducted a series of collaborative platforms in the form of nhimbes targeted at raising public awareness on the need for peace and tolerance ahead of the 2018 elections.…
Continue ReadingLocal communities calls for peace and tolerance ahead of the 2018 elections.
The Rights Heal Elections (RHE) consortium comprising of ZimRights, Heal Zimbabwe and the Election Resource Centre, combined efforts to mobilize citizens, to monitor the political environment and the polling processes…
Continue ReadingMwenezi East By-Election Preliminary Report.
Summary of Violations Between the 1st and the 17th of February 2017, Heal Zimbabwe recorded a total of 31 violations. All the violations fell in three categories, threats of violence…
Continue ReadingHuman Rights Violations in Zimbabwe hotspot areas- weekly alert.